पर्यटन क्षेत्रमा महिला सहभागिता | हुलाकी अनलाइन
पर्यटकीय सुन्दरताका दृष्टिले नेपाललाई विश्वकै नमुना गन्तव्यका रुपमा परिचित गराइँदै आइएको छ । पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर यस क्षेत्रमा जोडिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको संख्या पनि दिनानुदिन थपिदै गएको छ । मुलुकमा रोजगारको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा पर्यटनसँग सम्बन्धित निजी व्यवसायीले उल्लेख्य मात्रामा रोजगारको अवसर समेत सृजना गर्नु निकै सकारात्मक पक्ष हो । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसाय वा पेशामा आकर्षण पनि बढिरहेको छ । लगानीकर्ता, कामदार, स्वयम्सेवक, पथप्रदर्शक जस्ता क्षेत्रमा मानिसको सहभागिता बढ्दै गर्दा महिलाको भूमिका समेत महत्वपूर्ण बन्दै गएको पाइन्छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा फरक र कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायमा महिलाको भूमिका र सहभागिता निकै उत्साहजनक पनि हो । नेपालको सन्र्दभमा प्रायः सबै जसो क्षेत्रमा पुरुषको सहभागिता बढि हुने प्रचलन संस्कार जस्तै बनेता पनि पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिताले यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मात्र होइन महिलाहरुको सक्षमता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ ।
पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित होटल, रेष्टुरेण्ट, पर्यटकीय पसल, पथप्रदर्शक, ¥याफ्टिङ गाइड, ट्राभल एजेन्सी लगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाहरु अग्रसर भइरहेका छन् । यस बाहेक पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संगठनमा समेत महिलाको संलग्नता अर्को सकारात्मक पक्ष हो । कार्यक्षेत्रसँगै संघसंगठनको नेतृत्वदायी तहसम्म नै महिलाको सहभागिता र सक्रियताले महिलाको क्षमता प्रदर्शन गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको हरेका निकायमा महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरेको सन्दर्भ एकातिर छ भने निजी क्षेत्रमा समेत कार्यगत क्षमताका कारण महिला सहभागिता अनौपचारिक रुपमा अनिवार्य जस्तै बन्दै गएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न साहसिक र उत्तिकै जोखिमपूर्ण क्रियाकाप पनि हुने गर्दछन् । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, ¥याफ्टिङ, रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाइडिङ जस्ता गतिविधिलाई साहसिक पर्यटन मानिन्छ । विशेषगरि पुरुषहरु मात्र सहभागि हुने यस्ता गतिविधिमा पछिल्लो समय महिलाले पनि हिम्मत गर्न थालेका छन् । त्यसो त आजभन्दा दुई दशकभन्दा अघि नै नेपाली चेलीले साहसिक पर्यटनको उत्कृष्ट नमुना विश्वमाझ प्रदर्शन गरेको उदाहरण चानचुने थिएन । वि.सं. २०५० सालमा नेपाली चेली पासाङ ल्हामु शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेर नेपाली चेलीहरुको गौरव बढाएकी थिइन् । उनले देखाएको साहसिक कदमलाई अनुसरण गर्ने सयौँ नेपाली नारीहरु देखापरिसकेका छन् ।लगानीकर्ताको सवालमा पर्यटन क्षेत्रमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक नभए पनि कार्यगत सक्रियता भने बढ्दो मात्रामा छ । यस क्षेत्रमा संलग्न रहेर रोजगारी गर्ने महिलाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । मुलुकका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा संचालित होम स्टेहरुमा त झन महिला कर्मचारी नै बढि सहभागि रहेका छन् । महिला सहभागितालाई सहभागितालाई विदेशी पर्यटकले समेत प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । महिलाले सेवा प्रदान गर्ने पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको अकर्षण बढ्नु महिला व्यवसायीका लागि उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटनको अत्याधिक सम्भाव्यतालाई मध्येनजर गरेर नेपालमा पर्यटन शिक्षाको पनि विस्तार भइरहेको छ । विभिन्न कलेजहरुमा पर्यटन, यात्रा, होटल जस्ता विषयमा औपचारिक पढाइको सुरुवात भइसकेका छन् । पर्यटन शिक्षामा समेत महिलाको संलग्नता विस्तार हुँदै गएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र सक्रियता बढ्दै गर्दा यसभित्रका चुनौतिले पनि कहिलेकाँही नकारात्मक भूमिका खेलेको महिला पर्यटन व्यवसायीसँग छ । नेपालको सन्र्दभमा महिला भन्नासाथ घर गृहिस्थीमा सहभागि हुनुपर्ने सोचाइ अझै हटिसकेको छैन । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा सक्रिय हुन पुरुषलाईजस्तो महिलालाई सहज भने छैन । पारिवारिक समस्या पार गर्दै पेशा व्यवसायमा सक्रिय हुनपर्दाको अनुभव कहिलेकाँही नमिठो भइदिन्छ । त्यस्तै पर्यटन भनेको भौगोलिक कठिनाईलाई पार गरेर अघि बढ्नु पर्ने पेशा भएकाले पनि महिलाका लागि सहज छैन । साहसिक र जोखिमपूर्ण यात्रा पर्यटन व्यवसयको अर्को पाटो भएकाले यसभित्रका समस्या चिर्नु महिलाका लागि कम चुनौति छैन । त्यसो त जुनसुकै व्यवसायमा पनि चुनौति हुन्छन नै । ति चुनौतिलाई पन्छाएर सफल व्यवसायी बन्नु नै सघर्षको परिचय भएकाले महिलाले पनि चुनौति पार गर्दै अवसरको सदुपयोग गर्नु साहसिक कदम हुन्छ । किनकी पर्यटन क्षेत्रमा महिलाका लागि अवसर पनि प्रशस्तै छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने महिलाका लागि पुरुष समान ने अवसर छन् । तर चुनौति पार गर्ने क्षमता र दृढ इच्छाशक्ति भने अनिवार्य छ ।
नेपालको पर्यटन अवस्था
नेपालको सुन्दरताले विश्वालाई नै मोहित पारिरहेको छ । आर्थिक विकासको अभावमा कृत्रिम सुन्दरता शुन्य जस्तै भए पनि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता बेजोड छ । नेपालको पर्यटनलाई प्राकृतिक ग्ल्यामर भन्दा कुनै विमति नहोला । किनकी यहाँको पर्यटकीय सुन्दरता भनेकै प्रकृतिको देन हो । प्राकृतिक सुन्दरतालाई भरपुर सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक विकास, समृद्धि र उन्नतीका लागि अरु विकल्प खोज्नु नपार्ला । नेपालको सुन्दरताले पर्यटन विकासलाई सहज बनाएता पनि राजनीतिक विकृतिका कारण यसले सफलता पाउन सकेको छैन । नेपालमा जलपर्यटन, स्थल पर्यटन र हवाई पर्यटन प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । यस बाहेक धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पर्यटन पनि नेपालको विशेषता हो । यि र यस्ता अन्य सम्भावनाको ढोका खुला हुँदाहुँदै पनि राज्यले यथोचित लगानी गरेर पर्यटन व्यवसायलाई आर्थिक विकासको पाटोमा प्रयोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । यद्यपी पर्यटकीय गन्तव्यका दृष्टिले विश्वमै परिचित नेपालमा हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा विदेशी पर्यटक घुम्न आउनु सकारात्मक पक्ष हो । प्रयाः सबैजसो मुलुकको पर्यटनलाई त्यहाँको हावापानी र मौषमले प्रभाव पारेका हुन्छ । नेपाल पन भौगोलिक विविधतासँगै मौषम अनुसारको हावापानी परिवर्तन भइरहने मुलुक भएकाले यहाँ मौषमी पर्यटन फस्टाइरहेको छ । वर्षभरिमा चिसो हावापानी हुने ६ महिना नेपालमा पर्यटक आगमन वृद्धि हुने गर्दछ । नेपालमा विदेशी पर्यटकसँगै स्वदेशी पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पछिल्लो समय मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा स्वदेशी पर्यटकको अनुहार पनि बाक्लै देखिन्छ । यसले आन्तरिक पर्यटन विकासमा सहयोग त पु¥याउँछ नै, नेपाली नागरिकमा पनि भ्रमण गर्ने संस्कृतिको विकास भएको स्पष्ट पार्छ ।
लेखीका केन्द्रीय सदस्य, नेपाल ¥याफ्टिङ व्यवसायी संघ
एम.डी., सुपर होलिडेज प्रा.लि.
प्रबन्ध निर्देशक, शैक्षिक अभियान पाक्षिक
सुनवलमा पश्चिमाञ्चल स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला हुने